हामी कस्तो जनता हौं ? - जनताको आवाज - साप्ताहिक
हामी कस्तो जनता हौं ?
आवश्यकता भन्दा बढी मेडिकल कलेज चाहिँदैन र भएका स्वास्थ्य सेवाहरूमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ भनेर एक जना वरिष्ठ चिकित्सक अनशनमा बस्दा समेत जाग्न नसकेका हामी कस्तो जनता हौं ? सोचौं ।
- रामेश्वर सेढाइँ, वीरगञ्ज
अध्यागमन र भिसा प्रोसेसिङको सम्पूर्ण जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने गृहमन्त्रीको प्रस्ताव मन परेन । यस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाका भरमा निर्णय गर्नु हुँदैन ।
- शिवानी न्यौपाने, यादव काफ्ले
धेरैजसो नेताले गुन्डा परिचालन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा विकास-निर्माणमा बाधा पुगिरहेको छ । विधिको शासन मिचिएको छ । नेताहरूले नैतिकतामा रहेर काम गर्नुपर्‍यो ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले देशका संवेदनशील विषयमा दिएका अभिव्यक्तिहरू जिम्मेवार नभएको पाइयो ।
गरिबको मर्म गरिबले मात्र बुझ्छ । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन आमनेपालीका लागि हो । व्यापारमुखीहरूले उहाँको आन्दोलन बुझ्दैनन् । सरकारले उहाँको अनसनलाई हलुका रूपमा लिनुभएन ।
संविधान समयमै नबन्नुको परिणाम देशले भोगिरहेको छ । बलात्कार, हत्या, लुटपाट र अन्य जघन्य अपराधहरू बढिरहेका छन् । नेपालीहरूको माग छ— छिटोभन्दा छिटो संविधान चाहियो ।
- तेजेन्द्र श्रेष्ठ
झापा जिल्लाको ग्वालडुवा बजार तथा बैगुनधुरा बजार सडकखण्डमा पर्ने किस्नी खोलामा पक्की पुल निर्माण प्रारम्भ भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि काम पनि पूरा भएको छैन, जबकि निर्माण थालेको दुई वर्षमा सम्पूर्ण काम सक्ने सम्झौता ठेकेदार कम्पनीले गरेको थियो ।
- स्यामुयल पराजुली
बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका छन् । हत्या-हिंसा मौलाइरहेको छ । किन सरकारको ध्यान जाँदैन ?
- समर्पण सन्देश
पानी परेपछि काठमाडौंका सडकहरू हिलाम्य हुन्छन्, हिंड्नै हुँदैन । खाल्डाखुल्डीहरू पनि उत्तिकै छन् । समयमै सडक बनाउनुपर्‍यो अनि बलियो निर्माणमा जोड दिनुपर्‍यो ।
- अरेन शाह